သီဟသစ် ရဲ့ အားမာန်သစ်: L for Langkawi
Posted by သီဟသစ် at 11:28 PM
အစ်ကိုရေ ကျိန်စာတွေကြောက်စရာကောင်းပါ့ လားဗျာ .... မာစူရီဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးလေးက တော့ အင်မတန်သနားစရာကောင်းလှပါတယ်
ဗဟုသုတအတွက် ကျေးဇူး အစ်ကို
ပုံပြင်လေး လာဖတ်သွားပါတယ် အကိုရေ
မာစူရီ ရဲ့ ဘ၀လေးကသနားစရာလေးနော်
အောက်မှာအစ်ကို ထည့်ပေးထားတဲ့ ဟာသ လေးတွေကတော့ bonus ဆိုတဲ့အတိုင်း
စာဖတ်ပြီးတာနဲ့ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လန်းလန်း
ဆန်းဆန်း ရှိသွားစေပါ တယ်
ခုဟာက တ၀က်တပျက်ကြီး ဖြစ်နေတယ်...
ပုံပြင်လေးက ဖတ်လို့ကောင်းတယ်ကိုသီဟသစ်ရေ... စိတ်ဝင်စားသွားပြီ.. သူ့အကြောင်းတွေရှာဖတ်ကြည့်ဦးမယ်.. မျှတာ ကျေးဇူးပါ...
ပျော်လာတယ် မို့လား၊ ရေး ရေး များများရေး နေ့တိုင်းရေး ဖတ်ဖို့ အဆင်သင့် စောင့်နေတယ်၊း)
လှပခြင်းဟာ မိန်းကလေးတွေရဲ့ လက်နက်ဖြစ်သလို ရန်လဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်.
စနစ်တကျရေးထားတဲ့ ပို့စ်လေးကနေ ဗဟုသုတတွေ လာယူသွားပါတယ် ကိုသီဟရေ။
မာစူရီအကြောင်း စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်နော် ..
ပျော်လာခဲ့တယ်ပေါ့ ..း))
ဗဟုသုတ ရစေတယ် ..။
ဆက်ရေးမဲ့ လန်ကာဝီ ခရီးစဉ်အကြောင်းလေး စောင့်ဖတ်နေပါမယ်..။
မပြောပဲ သွားသိလားး) သိရင် လိုက်လည်တာပေါ့း)
ဘရားသားကြီးရေ ...လန်ကာဝီ အကြောင်းလေးတွေ ဆက်ရေးပါအုံးဗျာ.. ဖတ်ချင်သဗျ. ဟိုလူကြီးက စာမရေးတော့ဘူး လို့ဆိုလို့ ဘရားသားရေးတာတွေကို စောင့်ဖတ်မယ်ဗျ။
နောက်ကျရင် ဟိုလူကြီးတွေလို ပြောင်းရှည်ရှည်နဲ့ ကင်မရာဆောင်ထား..
ဗဟုသုတရစရာပါပဲ။ bonus လေးလည်း သဘောကျသဗျ။ :D
(ကျွန်တော်လည်း G for Geyland ဆိုတဲ့ ပိုစ့်လေးရေးနေတာ ..။ ပြီးမှ လာဖတ်နော်..:P)
ဒါပေမယ့် လန်ကာဝီ တော့သွားလည်ချင်တယ်။
scuba diving လည်းလုပ်ချင်တယ်။
၀ိုင်းလည်း အဲ့ဒီလန်ကာဝီကျွန်းကို သွားချင်နေတာ..
အခုမှပဲ သူ့သမိုင်းအကြောင်း ဖတ်ရတော့တယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျွန်းလေးမှာ လည်ခဲ့ဖူးတဲ့ အမှတ်တရလေးတွေ မျှပေးဦးနော်။
ကျိန်စာက လန့်ဖို့ကောင်းလှချည်လား နာကျည်းမှုက ထိတ်လန့်စရာ.... အကိုပျောက်နေတာ အဲ့သွားနေတာကိုး ..
သနားစရာ ဇာတ်လမ်းလေးကို ဖတ်သွားတယ်ယောက်ခမရေ။
ဒါနဲ့ စကားမစပ် ကျောပိုးအိတ်ဘဲ မျက်စိလျှမ်းသွားလား မသိဘူး။ မာစူရီရဲ့ ယောကျာင်္းရော။
စိတ်မကောင်းစရာ ဇာတ်လမ်းလေးအပြီးမှာ အောက်က ရယ်စရာဟာသလေးကြောင့် စိတ်ထဲမှာ အရမ်းကို ပေါ့သွားတယ်။
အစ်ကိုရေ ပုံပြင်လေး လာဖတ်သွားတယ်။ ဗဟုသုတရပါတယ် အစ်ကိုရေ။ အခုတော့ တော်တော် တိုးတက်ဖွံဖြိုးနေတဲ့ ပုံပဲနော်။ မာစူရီ ကတော့ သနားစရာပဲ ...။
(စကားမစပ်၊ လင်ခ့်ယူသွားခွင့်ပြုပါ ခင်ဗျာ)
ဦးသစ် ခေါ် ယောက်ခမ
ယောက်ခမအကြောင်း ရယ်စရာတွေ လူစုံရင်ပြောပြမယ်တဲ့
ကျိန်စာတွေကတော့ ကြောက်စရာကြီးတွေပါလား တို့နိုင်ငံလဲ ဘာကျိန်စာများ မိခဲ့လေသလဲ မသိ
ဗဟုသုတ ရတယ်လေ. အခုမှဖတ်ဖူးတာပဲ။
အစ်မက ညီမလေးရောင်ကို လန်ချာဝီသွားလည်မယ်
လို့ မှားပြီးပြောနေတာ..ရောင်က သွားဘူး ၊လန်ချာဝီဆို
တာ ကုလားကြီးတဲ့.. ဟဟား
ဒါနဲ့ လန်ကာဝီသွားပြီး ဘာတွေလုပ်တယ်ဆိုတာ ပို့စ်မ
တင်ခင် ကြိုပြောရရင်တော့ ... ကောင်မလေးတွေကို
ဒါ့ပုံသွားရိုက်တယ် မဟုတ်လား။။ တိုင်မယ်..တိုင်မယ်.
ကိုသီဟသစ်ရေ သိပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာပဲ။ ဆုတောင်းကျိန်စာလေး မြင်ကထဲက ခုံကိုရှေ့တိုးပြီးတော့ကို ဖတ်တာ...။ သူ့ကျိန်စာက တကယ်ကို စူးရှခဲ့သလိုပဲနော်။ သူ့ကို ဘာလက်နက်နဲ့ သတ်ခဲ့တာလည်း ဆိုတာလည်း သိချင်လိုက်တာ။ ရုပ်ပုံလေးနဲ့ တွဲဖတ်ရတော့ စိတ်ထဲမှာ စွဲကျန်ခဲ့တယ်...။ ဒီပို့စ်အတွက် တကယ်ကို ကျေးဇူး ကျေးဇူးး)
သနားစရာ မာစူရီလေးပါလားနော်။ မဖတ်ဖူး၊ မကြားဖူးတဲ့ သူ့ အကြောင်းလေးဖတ်ရလို့
စိတ်မကောင်းဘူး။ ကြောက်လဲ ကြောက်တယ် အဲလို ကျိန်စာတွေကို။
Bonus လေးလဲ အားပေးသွားတယ်။
စိတ်ဝင်စားစရာ ပုံပြင်လေးပါလား.. သားလေးအတွက် ပုံပြောကောင်းတဲ့ ဖေဖေ ဖြစ်တော့မှာပဲ.. ဖတ်လို့ကောင်းပါတယ်.. ခုမှ ရောက်ဖြစ်လို့ ဆက်ဖတ်လိုက်ဦးမယ်နော်.. ပျော်ခဲ့တယ်ဟုတ်.. နောက် နှင်းဆီဖြူလေးတို့နဲ့ အတူတူ သွားဦးမယ်လို့ ကြိမ်းဝါးထားတယ်မဟုတ်လား..( အခုတောင် အတူတူပါသလားမသိပဲ ရမ်းတုတ်သွားတာ..:))
သီဟသစ်. လန်ကာဝီသွားတာ အစ်မ ဖတ်ပြီး အဲသာကို အညွန်းလုပ်သွားတယ် ကျေးဇူးပါ။